dia ho lasa lavitra isika fa ny mampalahelo dia vesarin’ny frantsay ny fifidianana eto amintsika mba hahafahan’i Andry Rajoelina hanao sonia ny fiaraha-mitantana ireo nosy manodidina. Ireny fifidianana rehetra ireny dia efa nomanina sy namboarina araka ny filan’ny frantsay azy na hoe « orchestré » hametrahana ny saribakoliny eto sy ireo depiote hanaiky io fiaraha-mitantana io. Rehefa tsy lanin’ny antenimiera lanim-bahoaka ilay izy dia hidingin-drambo ny frantsay hoe io tokoa fa manaiky ilay fiaraha-mitantana isika. Famadihan-tanindrazana izany satria izao tontolo izao tamin’ny 1979 dia nanaiky fa antsika ireo nosy ireo. Ahoana no hiaraha-mitantana fa maninona raha haverina manontolo amin’ny gasy ? Ireo ve dia tsy haintsika ny mitantana azy irery ? Fanjanahana aminay ny fikirizan’ny frantsay hiara-mitantana ireo nosy ireo, hoy izy. Efa nifanarahana mialoha na hoe “pré-médité” fa Andry Rajoelina no atao lany filoham-pirenena ary antony nilazany io fa tsy maintsy izay no hitranga. Tamin’ny depiote indray dia any Frantsa renimalalany izy no nanambara fa nahazo depiote 80 mahery ary Ravalomanana 20 latsaka kely. Amin’ny 26 jona 2020 izany dia mety ho tonga aty ny filoha frantsay hiteny hoe “mifankatia be isika fa iaraha-mitantana ireo nosy manodidina ireo. Amin’izay angamba dia hoeken’ny depiote izany. Manentana ny vahoaka tsy hanaiky lembenana. Mikasika ny kaominaly dia efa niteny izahay fa tsy mety ny fitsipiky ny demokrasia eto ka asakasak’izay hilatsaka. Hitantsika fa haingon-tsehatra izay nandray anjara ary dia mamangy amin’ny fahoriana ireo izay tsy lany noho io rafitra io, hoy hatrany izy.